निकै र,हस्य मयी हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, निकै क ठि,न हुन्छ यिनीहरुको भावना बुझ्न - Nawalpur Dainik
निकै र,हस्य मयी हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, निकै क ठि,न हुन्छ यिनीहरुको भावना बुझ्न
राशिअनुसार व्यक्तिहरुको स्वभाव फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर कुन राशी भएका व्यक्तिको स्वाभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जान्न हामी सबै उत्सुक हुन्छौं। धर्मशास्त्रमा राशिलाई भूमि, अग्नी र वायूलगायत तत्वसँग जोडेर परिभाषित गरिएको हुन्छ। यहाँ हामीले वायू तत्वसँग सम्बन्धित राशिबारे उल्लेख गर्दैछौं।
यो श्रेणीमा तुला, मिथुन र कुम्भ राशि भएका व्यक्ति आउँछन्। तुला, धनु र मिथुन राशि भएका व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यो हो कि यीनिहरु धेरै स्वप्नशील हुन्छन्।यीनिहरुको कल्पना वास्तममै आकाश चुम्ने खालका हुन्छन्। साथै यी राशि भएका व्यक्तित्व पनि धेरै रहस्यमय हुन्छ। यीनिहरु कहिले के सोच्छन् ? यीनिहरुको अगाडिको कदम के होला ? यसमा पनि कसैले अनुमान लगाउन सक्दैन।
यस्ता व्यक्ति सन्तुलन कायम गर्न माहिर हुन्छ। दुई व्यक्तिबीच सम्झौता गराउनु छ भने पनि यी राशि भएका व्यक्ति अगाडि हुन्छन्। वायु तत्ववाला व्यक्ति कुनै एक चीजको अधिकता सहन सक्दैनन्। यीनिहरुलाई ब्यालेन्स गर्नु नै राम्रो लाग्छ। यीनिहरु सामाजिक पनि हुन्छन्। यी राशि भएका व्यक्तिको साथी संख्या पनि धेरै हुन्छ।
यीनिहरुलाई योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न मन पर्छ। यस्ता व्यक्ति धेरै जिज्ञासु प्रवृत्तिका हुन्छन्। तुला, मिथुन र कुम्भ राशिका व्यक्ति आसपासका परिस्थिति तथा अवस्थाअनुसार स्वयंलाई ढाल्न सक्षम हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिसँग आफ्ना योजना धेरै हुन्छन्। तर अरुको नयाँ सोचलाई पनि यीनिहरुले महत्व दिन्छन्।
Posted in जीवनशैली, विचार/ब्लग, समाज
Prevहत्तपत्त हार मान्दैनन् यी राशिका व्यक्ति, जस्तोसुकै परिस्थितीको पनि सामना गर्छन
Nextचर्चित गायक प्रकाश सपुतलाई पनि कोरोना पुष्टि